Farmaajo oo diidan saxiixa qoondada G/Banaadir ee Aqalka Sare | Keydmedia
Farmaajo oo diidan saxiixa qoondada G/Banaadir ee Aqalka Sare
Xildhibaan C/qaadir Cosoble oo Gollaha Shacabka katirsan ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ka baxay balantii uu ka qaaday Gobolka Banaadir, isagoo diidan wali saxiixa 13-ka kursi ee looga qoondeeyay Aqalka Sare.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inuu ka caga-jiidayo inuu saxiixa qoondada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare xili la filayo in dhawaan la qabto doorashadda Baarlamaanka labadiisa Golle.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble wuxuu xusay Madaxweynaha ku sifoobey been kadib markii uu fulin waayay matelaadda 13-ka kursi uu gobolka Banaadir ku yeelanayo Baarlamaanka, taasoo uu kahor sheegay furitaankii kalfadhiga 7aad ee Gollaha Shacabka.
Cosoble, oo hogaamiye Xisbiga Ileys, kana mid ah Madasha Xisbiyadda Qaran, ayaa caddeeyay in qorshaha Farmaajo ku jirin in reer Muqdisho ay helaan xuquuqda ka maqan, ee ah inay yeeshaan maqaam muuqda iyo metalaad Baarlamaanka, si lamid ah Maamullada kale.
Maamul dadkiisa ay soo doortaan ayay u baahan yihiin shacabka gobolka Banaadir oo tiro ahaan gaaraya 3 milyan, kuwaasoo mudo dheer Madaxdooda dusha looga keeni jiray, lagana soo magacaabi jiray Xafiiska Madaxweynaha.
Saddex sano iyo 8 bilood ayuu Farmaajo u sameynayo shacabka balad-qaadyo aan hirgelin, isagoo wali doonayo inuu kusii fadhiyo kursiga oo dib loo doorto ama mudo korarsi sameysto.